Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): December 2014
ပထမဆုံးအကြိမ် တရုတ် နှင့် မြန်မာပြည်ရှိ ကချင် တက္ကသိုလ်ကျောင်း/သားများတွေ့ဆုံ
at 12/30/2014 11:19:00 AM
MANGSHI JLH HTE MADALAY JLH NI NO (1) LANG
HKRUM ZUP BAWNGBAN HPAWNG GALAW
တရုတ် ပြည်ရှိ ကချင် တက္ကသိုလ် ကျောင်း သား များ နှင့် မြန်မာ ပြည်ရှိ
ကချင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်
အဖြစ် တရုတ် နိုင်ငံ ၊မာန်ရှီ မြို့ တွင် (၂၇.၁၂.၂၀၁၄) ရက်နေ့ ၌ ကျင်းပ
ပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၄င်း အခမ်းအနားသို့ တရုတ်နိုင်ငံ ၊ယူနန်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဟောင်း
ကချင် အမျိုးသား (ကချင့် သမိုင်းသုတေသီ) ဒူဝါမနမ်တောင် မှ ကျောင်းသူ
ကျောင်းသားများအား ကချင်ရီုးရာ နှင့် သမိုင်းကြောင်းများအား လာရောက်
ဟောပြော ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဤ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်း အနားသို့ တရုတ် နှင့် မြန်မာ ပြည်မှ ကချင် တက္ကသိုလ်
ကျောင်းသား ကျောင်းသူပေါင်း (၂၁၁)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ကြ ကြောင်းကို
လည်း ထပ်မံ သိရှိရပါသည်။
No. (1) Lang na Miwa Gumsan Mungdan Sakhkung Mungdaw, Mangshi Dakasu Jinghpaw Wunpawng Laili Laika hte Htunghking Hpung dakasu ni (JLH) hte Mandalay JLH ni December 27 ya shani hkrum zup bawng ban hpawng galaw ai lam chye lu ai.
Ndai hkrum zup bawngban hpawng hta Miwa Gumsan Mungdan Sakhkung Mungdaw Party Rapdaw Dinggrin Salang Usa Dukaba Manam Tawng (Sara Htoi Man) hte Rev. Dr. Maran Ja Gun yan kaw nna Wunpawng Htunghking hte Wunpawng ginru ginsa labau lam ni hpe tsun sharin ya ai lam chye lu ai.
Hkrum zup bawngban hpawng hta Mangshi Dakasu kaw na jawng ma ni, Mangshi Ramma ni hte Madalay JLH ni yawng marai (211) shang lawm ai lam chye lu ai.
Hpakant Ginra KIA Masat (2) Dap Ba, Dap Dung (6) Ginra Kaw Gasat Poi Byin Hpang Sai
at 12/29/2014 11:37:00 AM
By: myutsaw kasa
Dec 28, 2014 ya shani 4:30pm ten daram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (6) ginra Uru Seng Maw ginra tinang KIA niaGwi Chya Post de Myen asuya dap Tat-Ma-(66) npu na Hk-M-Y-(5) dap ni n-gun (60) ram hte Nma Hku maga hku lung wa nna wa htim gasat ai majaw tinang KIA dap dung (6) MHH Dap Dung (2) na Kung (2) ni hte laja lana gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.
Myen asuya dap ni gaw shana maga 7:00pm ten ram du hkra sinant kaba ni hte naw gap bun nga dingyang re lam shiga matut na chye lu ai, myen asuya dap ni hpyen n-gun bai jat nga ai majaw gasat poi gaw grau laja wa na masa nga ai lam KIA shiga lawk kawn na chye lu ai.
Ndai Gasat poi hta lahkawng maga na si hkala shiga tup hkrak rai nchye lu shi ai.
Dap Ba (2) Dung6ginra, Lai Nawng HKu de Myen bai Maden wa ...
at 12/29/2014 11:36:00 AM
Myu Tsaw Shagan
Dap Ba (2) Dung6ginra, Lai Nawng HKu de Myen bai Maden wa ....
Lai Nawng Hku hte Hwi Hka lapran ( 28 / 12 / 2014 ) ya shani Myen sawa ni gaw, Tinang Myu tsaw hpyen la MHH kung2ni nga ai Post de Laknak kaba hte gap sharu ai majaw, Anhte kaw na ni Post hpe yen kau da ya ai hpang, shana maga 6:00 Pm hta gaw Myen ni dai post hpe wan wa nat kau ma ai nga shiga na lu ai. Daihpawt kaw nna gaw, anhte maga na mung n-gun bai jat nna, wang shinggrup da sai majaw, Myen ni garai n lu pru wa shi ai lam, Daini gaw laga gap hkat hkat ai lam n nga shi ai nga, shawng lam shiga lawk kawn shiga na lu ai.
at 12/29/2014 09:34:00 AM
Southeast Asia was mourning its third airline catastrophe of the year Sunday after an AirAsia jet with 162 people aboard vanished over an Indonesian sea in violent weather. The fate of Flight 8501 remainedamystery almostafull day after it vanished. The Airbus A320, was bound for Singapore from Surabaya, Indonesia, when it lost contact with air-traffic control Sunday at about 7:24 a.m. Singapore time (6:24 p.m. ET on Saturday), the airline said.
Post by Apple Julia.
Laiza, ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း ပစ်ခတ်ခံရမှု (၁)လပြည့် အခမ်းအနား USA တွင်ကျင်းပ
at 12/23/2014 11:54:00 AM
Lachid Kachin's status update.
လိုင်ဇာ ၊ကေအိုင်အေ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း ၌ လုပ်ကြံခံရသော တိုင်း
ရင်းသား ဗိုလ်လောင်း (၂၃) ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိ သူများ အတွက် (၁)လ
ပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအား မြန်မာ တိုင်းရင်း
သားပေါင်းစုံ စုဝေးကာ USA,IOWA, တွင် ယနေ့ (၂၁.၁၂.၂၀၁၄)ရက်နေ့
လွန်ခဲ့ သော လ (၁၉.၁၁.၂၀၁၄) ရက်နေ့ ၌ ကေအိုင်အို ဌာန အနီးရှိ
ကေအိုင်အေ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း အား ခယာဘွမ် တောင်ကုန်း မှ
မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိ ၊ဖြင့် တမင် ချိန်ရွယ် ကာ
(၁၀၅-မမ) လက်နက်ကြီး ဖြင့် ပစ်ခတ် ခြင်းကြောင့် သင်တန်းတက်
ရောက်နေ သောတိုင်းရင်းသား ဗိုလ်လောင်း (၂၃)ဦးကျ ဆုံး ပြီး (၂၀)
ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ သည်မှာ (၁၉.၁၂.၂၀၁၄) ရက်နေ့ ၌ တလ
တင်းတင်း ပြည့် ခဲ့ ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၄င်းအခမ်းအနားအား Des Moines, IOWA,USA, တွင် (၂၁.၁၂.၂၀၁၄)
ရက်နေ့ ညနေ (၄)နာရီမှ (၆)နာရီ အထိ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ၊ အခမ်းနား
သို့ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ကချင်၊ချင်း၊ကရင်၊ ရှမ်း ၊မွန် ၊ရခိုင် နှင့် အခြားတိုင်း
ရင်းသား အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သက်ရောက်ခဲ့
အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းအ
သီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ မှ မိန့်ခွန်းများ ပြောကြား ပေးခဲ့ကြပြီး၊ ၄င်းအား
လုံး အဓိက ပြော ကြားသွားသည်မှာ.
-ယခု လို ဖြစ်ရခြင်းမှာ မိမိတို့ တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး စည်းလုံးမှု အားနည်း
-နောက်နှောင် ဤအဖြစ်မျိုး ထပ်မံ မဖြစ်အောင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီညွှတ်ရမည်
-တိုင်းရင်းသား အားလုံး ညီညွှတ်မှ သာမိမိတို့ တိုင်းရင်းသားများ ၏ တော်
လှန်ရေးမှာ အောင် မြင် နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း
-တိုင်းရင်းသားများအနေ နှင့် မိမိတို့ ၏ ရန်သူ အစစ်အမှန်ကို သိရှိဖို့
-မိမိတို့ ၏တခုတည်းသော ဘုံရန်သူမှာ စစ်အာဏာရှင်များသာ ဖြစ်ကြောင်း
စသည်ဖြင့် အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့ အပြင် "ချီကာဂို" မှ တကိုးတကား သက်ရောက်လာ သော အမေရိကန်ရှိ
ရခိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်း၏ ဥက္ကဌ မှလည်း မိမိတို့ ရခိုင် တိုင်းရင်း
သားများ သည်လည်း ရှေ့ဆက်ပြီး ၊ယခု လို အခြားသေားတိုင်းရင်းသားများ နှင့် အတူစည်းလုံးညီညွှတ်စွာ အတူတကွ လက်တွဲ ကာအင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်
လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မိမိအနေ နှင့် ဒီမှာရှိတဲ့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကိုယ်စား ပြောကြားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊၄င်း၏မိန့်ခွန်း
တွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
ဤ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသူ စုစုပေါင်း (၁၀၀) ကျော် ခန့်ရှိ ကြောင်း
အခမ်းအနားဦးဆောင်စီစဉ်သူ များထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။
(သတင်းဓါတ်ပုံ - Mar Tu)
at 12/23/2014 11:46:00 AM
Sir Charles Bernard, Chief Commissioner of British Burma, enters Mandalay palace for the first time. In two weeks Burma would be proclaimedaprovince of India.
There was still then the idea of placing another Burman prince on the Konbaung throne underaBritish protectorate, like Hyderabad or Manipur. When this was found 'impractical' (in part because the preferred candidate the Nyaunggyan Prince had just died in Calcutta), Sir Charles consideredaform of indirect rule through the Hluttaw (asaCouncil of Ministers headed by the Kinwun Mingyi).
In February 1886 however the British opted to abolish the Hluttaw, together with other royal institutions, much to the dismay of the Burmese aristocracy. Over the next year the even more fateful decision was made to rule all of "Burma proper" directly but the hill areas (the Shan states, Chin and Kachin Hills which not part of the old kingdom) "indirectly" through their own hereditary chiefs. The two areas (now the 'Regions' and 'States') would have very different colonial experiences leading to very different local perspectives and big problems by the time independence was regained in 1948.
at 12/23/2014 11:13:00 AM
!! တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ Federal ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ဖြစ်လာဖို့ တစ်အားမျှော်လင့်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကတိမတည်တဲ့ ကလိန်ကကျစ် ဗမာ့စစ်အာဏာရှင်ဖက်ဆစ်ဝါဒီ တွေဆီမှာ တောင်းဆိုနေတာကိုကမှားနေတာ!!
(1)ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်FUA ကိုတူညီဝတ်စုံပြောင်းလဲပြီး ပြည်ထောင်စုရဲ့တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်အဖြစ်ကြေငြာချက်ထုတ်မယ်
(2)UNFC အနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုရဲ့ ယာယီအစိုးရအဖြစ်အချူပ်အခြာအာဏာပိုင်ကြောင်း ကြေငြာချက်ထုတ်မယ်
(3)ပြည်ထောင်စုနယ် နမိတ်အထဲကနေ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းကို Burma State သတ်မှတ်ဖယ်ထုတ်ပြီး ပြည်ထောင်စုထဲကနေ ထုတ်ပယ်ကြောင်းကြေငြာချက်ထုတ်ရမယ်
(4)Burma State ကလွဲပြီးကျန်တဲ့နေရာရောက်ရှိနေတဲ့ စစ်အာဏာတပ်အားလုံးကို နယ်မြေကျူးကျော်သော နိုင်ငံခြားတပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြေမှုန်းရမယ်
(5) Burma State မှနေ၍ အခြားပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးမှာ ဝင်ရောက်နေထိုင်သော Burmese များကို ယာယီနေထိုင်ခွင့်ပေးထားပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို စီစစ်ဆောင်ရွက်မယ်
at 12/23/2014 11:08:00 AM
The Irrawaddy (Burmese Version)'s photo.
၂၀၁၄ တနှစ်တာ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ ကဏ္ဍများတွင် ထူးခြားထင်ရှား လူသိများပြီး အာရုံစူးစိုက်ခြင်း ခံရသူများကို The Irrawaddy သတင်းအဖွဲ့က Special Report အဖြစ် ရွေးချယ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
လက်ပံတောင်းတောင်မှ တရုတ်လူမျိုးလုံခြုံရေးတွေနဲ့ အစိုးရပေါင်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားဒေသခံတို့ကို ယုတ်မာပုံ Up Date ဓာတ်ပုံများ
at 12/23/2014 11:05:00 AM
Hlaing Htoo Aung's status update.
Hlaing Htoo Aung added5new photos — with လု လု and9others.
မျိူးချစ်ဗိုလ်လောင်းများ ကျဆုံးခဲ့မှု တစ်လတင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပြီ
at 12/23/2014 11:04:00 AM
Post by Sawwin Maung Australia.
Sawwin Maung Australia မြန်မာအစိုးရတပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဗိုလ်လောင်း (၂၃)ယောက် ကျဆုံးသွားရခြင်း အား အပြင်းအထန် ဆန့် ကျင်ရှုံ့ချခြင်း အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်သွားရေး —
at 12/22/2014 07:46:00 PM
Namhkai Hka's photo.
Mahkrai sin ai myen ni hpe sinat kashun nna gap sat kau da ....
Lashio lawu Tipo makau na mahkrai hkrai nga ai kaw sin nga ai myen hpyen lahkawng hpe Cycle hte sa wa ai La2gaw, sinat gashun la nna, hpyen du langai mi hte hpyen ma langai hpe gap sat kau da nna hprawng mat ma ai da. Dai kaw nna ya myen hpyen ni gaw shanhte n gwi sin mat nna shani shagu mare na masha lahkawng hkawng hpe woi la na mahkrai woi sin ma ai da.
2014-12-21 brother Myanmar Red Chinese network
Click the " Burmese Chinese net" Look Daily News
Stationed in Siberia (Xi Bo) police Southland (Namh lang) Bridge by unidentified gunmen attackedamotorcycle ,adeath one was injured. Subsequently, the government forces in setting up armed checkpoints .
December 11, 2014 , on the road wide Loon Lashio in northern Shan State branch roadside (Kuolong) Southland bridge ( located in Siberian city of South Lan -Namh Lan) ), and there are unknown armed men motorcycle parked in former police station, gunmen opened fire to the police station , two police officers were injured , one of them died in the hospital .
2014-12-21 红军哥哥 缅甸中文网
驻守在西伯（Xi Bo）南兰（Namh lang）桥的警察被不明身份的摩托车枪手袭击，一名死亡一名受伤。随后，政府军在此设立武装检查关卡。
Hugawng Danai moi na pati duwa amat usa Duwa Ngan JanawaYawn hkyen shiga
at 12/21/2014 08:41:00 AM
"Yawn Hkyen Shiga"
KABA amu madu Sara Saga Gum Jatakatsa Duwa N'gan Ja Naw (asak 70), Shatapru gaw December 19, 2014 ya shani Madu Yesu hta yup pyaw mat sai lam chye lu ai.
Duwa N'gan Ja Naw gaw Du jan Nding Ja Awnganingrum ningtau rai nna, N'gan Ja Bu, N'gan Ja Hpa, (N'gan Zau Hkum), Du-up N'gan Naw (a) John (KIA 254 dap nawng up), N'gan Roi Pa (a) Ja Roiachyinghkai kawa, kashu8akaji dwi rai nga ai.
Ngam nga ai dum nta masha ni hte sumtsan de du nga ai kashu kasha, kahkri kanam ni, jinghku jingyu ni hte ngam nga ai moi mang hpe akyu hpyi makoi mayang na matu hkrun lam hkawm sa wa na Sara Saga Gum Jat hte dum nta masha niamatu akyu jawm hpyi ya na matu hkungga let saw lajin dat ga ai.
photo By KABA
တိုင်းရင်းသားညီနောင်လူငယ်ဗိုလ်လောင်းများအတွက် (၁)လ ပြည့် အောက်မေ့လွမ်းဆွတ်ခြင်း အထိမ်းမှတ်
at 12/20/2014 08:39:00 AM
(၁၉.၁၁.၂၀၁၄) ရက်နေ့ ၌ လိုင်ဇာ ကေအိုင်အေ ဗိုလ်သင်တန်း
ကျောင်းအား ဗမာ စစ်တပ်သည် ခယာတောင် မှ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ
တမင် ချိန်ရွယ် ကာ (၁၀၅-မမ)ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျဆုံးသွားသော
တိုင်းရင်းသားညီနောင်လူငယ်ဗိုလ်လောင်းများအတွက် (၁)လ ပြည့်
စီတာပူ မနောကွင်း@ (၁၉.၁၂.၂၀၁၄)
at 12/19/2014 10:46:00 AM
ZenDu Dut Lar Kachin's photo.
ZenDu Dut Lar Kachin
ကချင်ပြည်သည် တရုတ်ပိုင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွား နိုင်သည်။
ဗိုလ်နေ၀င်း ကိုယ်တိုင်းလည်း ၁၉၅၀ကျော် တုန်းက ကချင်ပြည် တ၀က် လောက်ကို တရုတ်ထံရောင်စားခဲ့ပီးပီ။
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်ကို ဘင်္ဂလားတွေ ကျူးကျော်လာရောက်နေထိုင်းနေသလို ကချင်ပြည်လည်း တရုတ်အတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွား လောက်ပြီ။
ဖင်ပိတ်ငြင်းမယ်ဆိုရင် မန္တလေးမြို့ကို ဥပမာ ကြည့်ပါ။
မဆလခေတ် ဗမာသမ္မတ ဗိုလ်နေ၀င်း ရဲ့ ဗုဓ္ဒဘာသာကို နိုင်ငံတော် ဘာသာအဖြစ် အသုံးပြုဖို့ တရားဝင် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်
တကယ်လို့ KIO/KIA သာ မရှိခဲ့ရင် ယခုချိန်လောက်ဆို ကချင်လူမျိုးတွေ တွေးသာကြည့်တော့
ဒါပေမဲ့ အသက်ရှင်တဲ့ ထာဝရဘုရား က တစ်ခေါက် ကယ်တင်ထားပြီ ဖြစ်တဲ့ ကချင်လူမျိုး ပစ်မထားသွား ခဲ့ဘူး။
ရှမ်းနီတွေ ရဲ့ မှတ်ပုံတင်မှာ ရှမ်းဗမာ ဖြစ်သွားကုန်တယ်နော်
KIO/KIA သာ မရှိခဲ့ရင်
ကချင်တွေရဲ့ မှတ်ပုံတင်လည်း ကချင်ဗမာ (သို့)ဗမာကချင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလောက်ပြီ။
ကချင်ယောင်္ကျားလေး အများပိုင်း မူးရစ်ဆေးဝါး ကြောင့် ပျက်စီးသေကုန် သွားနိုင်သလို
ကချင် မိန်ကလေးအများပိုင်း ဗမာ မယား ဖြစ်ကုန်လောက်ပြီ။
မြေခ မလိခ တို့ ဆုံစည်းရာ မြစ်ဆုံ လေးရဲ့ သဘာဝအလှဟာ ခုချိန်လောက်ဆို အကျီးတန်နေလောက်ပြီး။
၂၀၀၇ ရေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဘုန်းကြီး များ ကိုသတ်ဖြတ်သူစစ်အုပ်စုကိုဘယ်နေ့ဖမ်မှာလည်း?
at 12/19/2014 10:40:00 AM
Myo Kyaw Khaing's post.
A New Zealander Caffe shop manager would face 3-4 years imprisonment for usingaBuddha image in his caffe shop for advert. What will the Burmese Government do to the Burmese troops who have committed crimes during 2007 Saffron revolution? They killed and intimidated many monks.
Myo Kyaw Khaing
ရွှေဝါရောင်မှာ သံဃာတော်တွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်တဲ့
ထိုစစ်သားလွှတ်တော်အမတ်ကို မြင်ရတဲ့ ဝမ်ပေါင်ကတော့
ငါခိုင်းလိုက်တာနဲ့ သံဃာတစ်ရာနီးပါး မီးလောင်ဗုံးနဲ့ ပစ်ခံရတာတွေးပြီး
မပြုံးပဲနဲ့ ဝါးလုံးကွဲသံနဲ့ ရယ်လိုက်တယ်
ထိုမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး င်္ဘဂါလီလွှတ်တော်အမတ် သုံးယောက်က တီးတိုးပြောနေတယ်
ဒီကောင်တွေ အချင်းချင်း ပြန်သတ်ရင်းနဲ့ သူတို့အမျိုးမျိုးသူတို့ ဖြုတ်နေတယ်တဲ့
တကယ့်အမျိုးဘာသာ သာသနာဖျက်စီးသူကို မထိမတို့ မပြောမဆိုပဲ
အမျိုးဘာသာ သာသနာကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့
ပြောဆိုသူကိုကြတော့ တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီးခံရတာ တကယ်ကို လောကကြီးက
အင်း ဘာမှမဆိုင်တဲ့ လောကကြီးကို အပြစ်တင်မိပြီ
အနာနဲ့ဆေးလွဲပြီး ရေလိုက်မှားတဲ့ ငါးဟာ
လုပ်ရပ်မှားတွေလုပ်နေတဲ့ (ဟိုတစ်ဖွဲ့)ကြောင့် ဘာသာ သာသနာပျက်စီးမှာကို